Maraykanka oo Dacwad ku soo oogaya madaxweynaha FIFA Sepp Blatter – Radio Daljir
Maraykanka oo Dacwad ku soo oogaya madaxweynaha FIFA Sepp Blatter
Juunyo 3, 2015 2:00 b 0
Arbaco, Juun 03, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha FIFA, Sepp Blatter ayaa saraakiisha dalka Mareykanka ay baarayaan sida uu ugu lug lahaa musuqmaasuqa lagu eedeeyay Hay’adda sida ay warbaahinta Mareykanka ku warameen.
Warkan ayaa imaaday kaddib saacado, markii uu ku dhawaaqay Mr Blatter inuu is casilaayo.
Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa Isbuucii hore billaabay dembi baaris ay ku sameynayaan 7 xubin oo FIF aka tirsan oo lagu xiray Switzerland.
Laba maalin kaddib xarrigaasi, Blatter waxaa loo doortay markel inuu noqdo madaxweynaha FIFA.
Sikastaba, waxa uu sheegay inay u muuqato in guushiisa uusan qofkastoo caalamka ku nool uusan soo dhaweyn.
Mr Blatter ayaa hoosta ka xariiqay in \_”Fifa ay u baahan tahay dib u habeyn qoto dheer.
\_’Musuq maasuq baahsan\_’
Weriyaha BBC-da ee Magaalada New York, Nick Bryant, waxa uu sheegayaa in dhowr xubno sare ah oo Mareykan ah ay wargeyska New York Times ay u sheegeen inay filaayaan in ay wada shaqeyn ka helaan xubnaha saree e FIFA si ay u baaraan musuqa iyo isdabamarinta lacagaha si ay dacwad ugu oogaan Mr Blatter.
Isbuucii lasoo dhaafay haweeneyda madaxda u ah waaxda dacwad oogista Mareykanka waxa ay FIFA ku bilmaamtay “meel hannaankeeda uu musuqmaasuq qota dheer uu ku baahay” hay’adda ugu sareysa ee ciyaaraha kubadda cagta caalamka, laakiin xilligaasi Loretta Lynch si toos ah ugameysan hadlin Sep Blatter.
Sidoo kale ma aysan xusin in tani ay tahay bilowga baaritaanka ama dhammaadka. Waxeysa ku baaqday in FIFA cusub la bilaabo.
Xilli sii horeysay, FBI-da, adeega dakhliga Gudaha iyo waaxda dawacd oogista ee Bariga New York oo arrintan ku lug leh, waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan iscasilaadda Blatter.
Waaxda cadaaladda ee Mareykanka waxa ay hadda baaritaan ku wadaan 14 qof ee lagu eedeeyay inay qaateen laaluush lagu qiyaasay 150 milyan oo dollar, 24 sano gudahood.
Laba madaxweyne ku xigeen ayaa ka mid ah 7-da xuben ee FIFA ka mid ah ee lagu xiray magaalada Zurich. Waxa ay dhammaantood sugayaan in Mareykanka uu dacwad ku oogo.
Laakiin arrintaasi oo harweysay doorashadii madaxtinimada ee FIFA, kameysan hor istaagin Blatter in Markale la doorto.
Dowladda Nigeria oo xabsiga dhigtay xubno lagu helay Musuq-maasuq
Madaxweynaha Soomaliya oo ka Qeyb-galey xafladda Caleema saarka Al-Bashiir